Momba anay - Fujian Mengjiaolan Daily Chemicals Co., Ltd.
Mengjiaolan Daily Chemicals dia natsangana tamin'ny taona 1995 tao an-tanànan'i Zhangzhou, faritanin'i Fujian. Mpanamboatra OEM sy OBM matihanina izahay amin'ny famokarana sy fanondranana vokatra Bath & Body Care, toy ny gel mando, lotion amin'ny vatana, fandroana bubble, fikosoham-batana, zavona amin'ny vatana, fizzera mandro, baomba mandro ary fanomezana fampiroboroboana mandritra ny fialantsasatra Krismasy toy ny fividianana fanomezana. Mandritra izany fotoana izany dia mijery ihany koa ireo vokatra fikarakarana tanana toy ny savony tanana, menaka fanosotra sns ... Ho an'ny tsena iraisam-pirenena, ny fanomezana fanomezana fandroana no tena ataonay hatramin'ny taona 2003. Nanomboka teo dia niara-niasa tamin'ny mpanjifa avy any Etazonia, Kanada izahay. , Alemana, Royaume-Uni, Netherlands, Russia, sns. Ao amin'ny tsenan'i Shina, manana marika COATI manokana izahay izay marika malaza ho an'ny China amin'ny fivarotana vokatra fandroana zaza sy zaza ary fikarakarana hoditra. Ny marika COATI anay izao dia efa nivarotra amina magazay lehibe sy kely eran'i Shina, toa ny Wal-Mart, Metro, RT-Mart, sns. Ny Mengjiaolan Daily Chemicals dia mandray ny mpanjifa ho voalohany. Izahay dia manaja sy manohana ny filan'ny mpanjifa amin'ny vokatra miaraka amin'ny fandefasana fotoana sy ny kalitao avo lenta.
Asa momba ny fandroana sy fikolokoloana ny vatana ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe
R&D matihanina sy ekipa mpamorona
Ekipa QC matanjaka sy fenitra Strict QC
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny orinasanay, ny orinasan-tsika vaovao dia mandrakotra maherin'ny 100000sq metatra, izay misy fitaovana mandroso sy atrik'asa tsy misy vovoka 100,000 ambaratonga voamarina amin'ny GMPC, ISO22716, BSCI, sns. Mino izahay miaraka amin'ny tontolon'ny famokarana lehibe ary fenitra fanaraha-maso henjana, ny marika mpanjifanay dia hahazo laza avo rehefa eo am-pandrosoana.
Izahay Mengjiaolan Daily Chemicals dia manokatra ny varavarantsika ho an'ny mpanjifa sy ny namana eran'izao tontolo izao hitsidika anay. Vonona hiara-hiasa aminao izahay miaraka amin'ireo serivisy kintana dimy sy traikefa matihanina.
Manantena ny handre anao!
Fanomezana Spa Bath, Fizera fandroana, Fanomezana fanomezana ho an'ny Spa Spa, Fanomezana fanomezana spa fandroana spaoro, Fitaovana fanomezana Spa Bath, Napetraka fanomezana Krismasy,